Finland oo baaritaan ku sameynaysa dalabka kharaabada Soomaalida. | Somaliska
Wasiirka Socdaalka iyo Arimaha Yurub ee dalka Finland ayaa sheegtay in ay baaritaan ku sameynayaan nidaamka ay soomaalidu u dalbadaan reerahooda ayadoo looga shakiyay in ay Soomaalidu ka ganacsadaan dhoofinta dadka oo ay khiyaano ku jirto dalabyadooda. Arintaan ayaa qaasatan waxaa dhaliyay markii Laanta Socdaalka Finland ay soo gaartay codsiyo aad u fara badan oo ku saabsan waalid dalbanaya caruur ay sheegayaan in ay soo korsadeen. "Arintaan waxaa ogaadey Laanta Socdaalka , hadii baaritaanka ay ku cadaado in ay jirto, kiisaska waxaan u yeelan doonaa fiiro gaar ah" ayay tiri wasiirka Socdaalka Astrid Thors
Finland oo baaritaan ku sameynaysa dalabka kharaabada Soomaalida.
Wasiirka Socdaalka iyo Arimaha Yurub ee dalka Finland ayaa sheegtay in ay baaritaan ku sameynayaan nidaamka ay soomaalidu u dalbadaan reerahooda ayadoo looga shakiyay in ay Soomaalidu ka ganacsadaan dhoofinta dadka oo ay khiyaano ku jirto dalabyadooda.
Arintaan ayaa qaasatan waxaa dhaliyay markii Laanta Socdaalka Finland ay soo gaartay codsiyo aad u fara badan oo ku saabsan waalid dalbanaya caruur ay sheegayaan in ay soo korsadeen.
“Arintaan waxaa ogaadey Laanta Socdaalka , hadii baaritaanka ay ku cadaado in ay jirto, kiisaska waxaan u yeelan doonaa fiiro gaar ah” ayay tiri wasiirka Socdaalka Astrid Thors